कला / साहित्य / विचार(Arts/ Literature & Thought) in Nepalese Women: All about women in Nepal -
असार १०, काठमाडौं । उपन्यासकार तथा लेखक देवेन्द्र न्यौपानेको चेतनामूलक उपन्यास ‘सङ्गत’ विमोचन गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध ब्यूरोद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्ध दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा लेखक न्यौपानेको उक्त उपन्यास विमोचन गरिएको हो । उपन्यास महानगरीय प्रहरी...
दुई महिला स्रष्टा सम्मानित
जेठ १७, काठमाडौं । नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान गरेवापत दुई नारी स्रष्टालाई आज सम्मान गरिएको छ । नारी साहित्य प्रतिष्ठानले साहित्यकार माया ठकुरी र इल्या भट्टराईलाई जनही रु १५ हजार पाँच र सम्मानपत्रले सम्मान गरेको हो । ठकुरीलाई गोमा स्मृति सम्मान र भट्टराईलाई गोमा स्मृति स्रष्टा विशेष सम्मानबाट सम्मान...
हामीलाई सपनामा किन ऐँठन हुन्छ ?
फागुन १३, काठमाडौं, (एजेन्सी) । किन हामी दु:स्वप्न देख्छौँ र त्यसबेला किन ऐँठन हुन्छ ? हामीमध्ये धेरैलाई नराम्रो सपना देखेको र ब्युँझिदा अप्ठेरो भएको अनुभव भएको छ। त्यस्तो अनुभवलाई मनोवैज्ञानिकहरू कसरी हेर्छन्। दाँत किट्दै, मुटु ढुकढुक हुँदै गरेको अवस्थामा कहिल्यै व्युझिनु भएको छ । सपनामा ऐंठन भएर छट्पटिने तपाई एक जना माात्र हैन । ९०...
किन कोही साह्रै भाग्यमानी हुन्छन्
किन केही मानिसहरू साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ? तपाईंले आफैलाई यी प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ भने एक पटक पुनस् सोच्नुस्। बिबिसि मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन्, मनोविज्ञ रिचर्ड वाइजमन भन्छन्। वाइजमनले भाग्यको भूमिका र मानिसहरूको जीवनमा त्यसले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिराखेका छन्। उनले...
भगवती खनालको गजल सङ्गह ‘माटो बोल्छ’ सार्वजनिक
असोज २१, नुवाकोट । जिल्लाका दुई स्रष्टाको कृति आज यहाँ विमोचन गरिएको छ । बेलकोटगढी नपा–७ महादेवफाँटमा आयोजित कार्यक्रममा रामकृष्ण गजुरेललेका मुक्तक सङ्ग्रह ‘कर्कलाको पानी’ र भगवती खनालको गजल सङ्गह ‘माटो बोल्छ’ विमोचन गरिएको हो । ती कृतिको नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद...
काँठ क्षेत्रलाई समेटिएको पहिलो गीत 'हाम्रो नवीन नगर' सार्वजनिक
असोज २, काठमाडौं । हाम्रो नवीन नगर भन्ने देशभक्ति गीतको म्युजिक भिडियो आइतबार एक कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको छ । देशभक्ति गीतको भिडियो विमोचनमा तारकेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख र डा. केदार नरसिंह कोसी लगायत जनप्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा भिडियो विमोचन गरेका थिए । भिडियो विमोचन कार्यक्रममा जनता डिजिटल फिल्मस प्रालिका संयोजक केशव...
सञ्चार माध्यममा महिलाको संख्या बढेपनि सहभागिता सन्तोषजनक छैन
साउन २३, काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमको विकास तथा प्रसारण पत्रकारितामा चार दशक लामो सरकारी नियन्त्रण र एकाधिकार हटेर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ लागु भएपछि यसले इच्छुक विभिन्न संस्थालाई एफ एम प्रविधि प्रयोग गरेर विभिन्न स्टेशन चलाउने अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा यस्ता क्षेत्रमा नीजि लगानी बढ्दै गएको छ । यस्ता नीजि क्षेत्रले चलाएका सञ्चार...
सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीको ‘यतै घमाइलो उतै घमाइलो’ सार्वजनिक
साउन २२, काठमाडौं । सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीको शब्द रहेको तीजसम्बन्धी ‘यतै घमाइलो उतै घमाइलो’ गीति भिडियो बजारमा आएको छ । चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी अधिकारीको शब्द तथा गायिका सारीका घिमिरेको आवाज रहेको उक्त गीति भिडियोको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोमबार विमोचन गर्नुभयो । विमोचनपछि उहाँले सामाजिक...
अब बलात्कारीलाई उन्मुक्ति कि फाँसी ?
►शकुन्तला कटुवाल (पाठक) कसरी रोकियो होला उनको त्यो अन्तिम स्वास, सम्झदा पनि मन पोल्छ । सास नै रोकिएला जस्तो हुन्छ । आवेगले एक्कासी शरीर नै तातिन्छ । निर्मलाको जीवन अन्त्य गर्नेहरुलाई भेटेर तिनीहरुको गला थिच्न मन लाग्छ । मन बेचैन भएर के गरौ र कसौ गरौ हुन्छ । सायद, निर्मलाको विभत्स हत्याको दृष्य देख्ने र सुन्नेको मनमा यस्तै हुँदो...
'यू आर ओभरक्वालिफाईड'
►प्रज्ञा दाहाल भर्खरै सरकारले सम्पूर्ण बेरोजगारहरुलार्ई चारमहिने रोजगारी दिने र त्यो पनि नसक्नेलाई साठी दिने बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यो निर्णय सुनाइरहँदा समेत मिनेटैपिच्छे कयौं युवाहरुको रोजगारीको सपनामाथि तुषारापात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मूख देशमा मात्र नभएर...
लेखकहरुका दिन खुल्दैछन् : सर्जक रामप्रसाद खरेल
साउन ६, काठमाडौं । रामप्रसाद खरेल प्रदेश नम्बर एकको इटहरीमा वसेर साहित्य तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । रे पुस्तकवाट विशेष चर्चामा आएका उनि पछिल्लो समयमा कविताहरु मार्फत पनि चर्चामा छन् । काठमाण्डौका ठूला मिडियाहरुले नदेखेपनि पूर्वका प्रायजसो सवैखाले मिडियामा उनलाई सुन्न,पढ्न र देख्न पाइरहिन्छ । ओशो सन्यासी तीनै...
हातेमालो साहित्य संगमको 'शाव्दिक समारम्भ'मा रचनाको बाढी
असार १९, काठमाडौं। हातेमालो साहित्य संगमको नियमित काव्य श्रृङ्खला 'शाव्दिक समारम्भ' शनिवार एक समारोह बीच डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, लाजिम्पाटमा सम्पन्न भयो । सुनिल अधिकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेल प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि रामकाजी कोने रहेको सो समारोहको सञ्चालन संस्थाका महासचिव विपिन...
लक्ष्मी हमालको ‘के हुँदैछ आजभोलि’
असार १९, काठमाडौंं । गायिका लक्ष्मी हमालको दोस्रो गीति एल्बम ‘के हुँदैछ आजभोलि’ गीति एल्बम सोमवार सार्वजनिक गरिएको छ । गायिका हमालको शब्द र स्वर रहेको गीतमा मायाको महत्वलाई देखाइएको छ । शास्त्रीय संगीतमा आधारित गीति एल्बममा सञ्जय हमालले संगीत दिनुभएको छ । रेडियो नेपालका उपनिर्देशक टीका भण्डारीले एल्बमको विमोचन गर्दै नेपाली...
रञ्जित गजमेरको पहिलो नेपाली एल्बम ‘कृति’
असार १४, काठमाडौं । संगीतकार रञ्जित गजमेर भन्नासाथ चलचित्रका थुप्रै समुधुर गीतका संगीतहरू सम्झन्छौं । उनले संगीत दिएका चलचित्रका गीतहरू धेरै हिट छन् । अधिकांश गीतमा आफ्नो संगीत भर्न सफल गजमेरकोे नेपाली एल्बम भर्खरै म्युजिक नेपालमार्फत जारमा आएको छ । कृति नामक सो एल्बममा रञ्जित गजमेर, कुसुम गजमेर तथा नौ लाख ताराका रचयिता स्वर्गिय...
नेपाल भाषा साहित्य पर्व सम्पन्न
भदौ ३१, ललितपुर – नेपाल भाषा साहित्य पर्व आज यहाँ सम्पन्न भयो । वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले उक्त पर्वको आज यहाँको केशव नारायण चोकमा उद्घाटन गरे । आफ्नो उद्घाटन भाषणमा शताब्दी पुरुष जोशीले नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदाका देख्न सकिने स्वरुपको मात्र हैन त्यससँग जोडिएका अदृश्य परम्पराको संरक्षणमा पनि ध्यान पुग्नुपर्ने...